NLD ကို ဒီရခိုင်မြေပေါ်မှာ လုံးဝကို ပပျောက်သွားစေချင်တဲ့ လူတချို့ရှိနေတယ် – Nyang Media
NLD ကို ဒီရခိုင်မြေပေါ်မှာ လုံးဝကို ပပျောက်သွားစေချင်တဲ့ လူတချို့ရှိနေတယ်
အောက်တိုဘာ 17, 2020
AAN / NLD ပါတီ၊ မြို့နယ်ဗဟိုကော်မတီအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး မအေးအေးနိုင်
ဒေါ်နီနီမေမြင့်ကို လက်နက်ကိုင်တစ်ယောက်က လှေဆီခေါ်သွားတယ်။ ဒေါ်ချစ်ချစ်ချောကိုတော့ လက်နက်ကိုင်တစ်ယောက်က ဇက်ပိုးကိုတဖြောင်းဖြောင်းနဲ့နှစ်ချက်သုံးချက်ရိုက်ပြီး တုပ်ဆွဲပြီးခေါ်သွားတယ် . . .
ယခုလ (၁၄) ရက်နေ့မနက်ပိုင်းက ရခိုင်ပြည်နယ်၊ တောင် ကုတ်မြို့နယ်၊ ဖောင်းကားကျေးရွာသို့ မဲဆွယ်စည်းရုံး ရန်ရောက်ရှိလာသော NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း (၃) ဦးကို လက်နက်ကိုင်လူတစ်စုကဖမ်းဆီးရာတွင် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း သုံးဦးနှင့်အတူ ရှိနေခဲ့သော တောင်ကုတ်မြို့နယ်၊ NLD ပါတီ၊ မြို့နယ်ဗဟိုကော်မတီအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး မအေးအေးနိုင်ကို ငြမ်းမီဒီယာက ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားသည်။
ငြမ်းမီဒီယာ – (၁၄. ၁၀. ၂၀၂၀) နေ့မနက်ပိုင်းက ကြုံတွေ့ ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကို မှတ်မိသလောက် ပြန်ပြောပြပေးပါ။
MAAN – ကျမတို့ မနက် (၉) နာရီဝန်ကျင်လောက်မှာ ဖောင်းကားကိုရောက်တယ်။ ပြီးတော့ အခမ်းအနား လုပ်မယ့်နေရာမှာ ခဏတဖြုတ်နားတယ်။ နောက် ရွာသားတွေကလာခေါ်လို့ ထမင်းကျွေးမယ့်နေရာကို ကျမတို့သွားပါတယ်။ (၁၀) နာရီ (၄၅) လောက်မှာ ကျမတို့ထမင်းစားကြပါတယ်။
ရွာသားလေးတွေထဲကလည်း တစ်ယောက်ကလည်းကျမတို့နဲ့ အတူဝင်စားတယ်။ ကျမတို့အဖွဲ့ကတော့ အဲဒီမနက်သွားတာ (၇) ယောက်၊ ရွာကို ကြိုရောက်နေတဲ့တစ်ယောက်နဲ့ပေါင်းရင် (၈) ယောက်ပေါ့။ ထမင်းစားနေတုန်းမှာပဲ လက်နက်ကိုင်ထားတဲ့သူတွေရောက်လာပြီး ‘ထ . . ထ’ ဆိုပြီး ကျမတို့ကို ရပ်ခိုင်းပါတယ်။ ပထမတော့ ကျမတို့က ရွာသားတွေ နောက်နေတယ်ပဲထင်ခဲ့တာ။
သူတို့က မျက်နှာမှာ Mask တွေတပ်ထားပြီး အားကစားဘောင်းဘီတိုတွေနဲ့ဆိုတော့ ရွာကလူငယ်တွေ နောက်ကြတာလို့ပဲထင်မိတယ်။ နောက်မှ သူတို့မျက်နှာထားတွေကိုကြည့်ပြီးမှ သိလိုက်တယ်။ ကျမတို့ အားလုံးကိုလည်း ထမင်းဝိုင်းကနေ အတင်းမတ်တပ်ရပ်ခိုင်းတယ်။ ပြီးတော့ ကျမကိုနာမည်မေးတယ်။ ကျမကနာမည်ပြောပြီး ဒီရွာကလို့ပြောလိုက်တယ်။ ကျမကိုထားပြီး တခြားလူ တွေကိုမေးတယ်။ ပြီးတော့ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမင်းအောင်ရဲ့မျက်နှာကို တစ်ချက်နှစ်ချက်ရိုက်တယ်။ ပြီးတော့ သူတို့ဒေသအသံနဲ့ “မန်းအောင်ကို ခေါ်လာခရဖို့ လား” လို့ပြောတယ်။ အဓိပ္ပါယ်က “မင်းခေါ်ကိုခေါ်ခဲ့ရမလား” ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ပေါ့။ သူတို့ဒေသစကားသံပေါ့။ ကိုမင်းအောင်က “ကျနော်တို့လိုက်ခဲ့ပါမယ်။ အေးအေးဆေးဆေးပဲပြောကြပါ” လို့ပြောပါတယ်။
ဦးမင်းအောင်ကိုလက်ပြန်ကြိုးတုပ်ထားတာကို ငှက်ကြီးတောင်ဓားနဲ့ဖြတ်ပြီး လက်ကိုရှေ့ကနေပြန်ပြီးချည်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာကျမတို့နဲ့ပါလာတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ကို ပင်နီအင်္ကျီဝတ်ထားရကောင်းလားဆိုပြီး …
သူတို့က ကိုမင်းအောင် ကို လက်ပြန်ကြိုးတုပ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ကျမတို့ အဖွဲ့ ထဲက ကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုလည်း အိမ်ရှင်တွေထင်ပြီး သေနတ်ဒင်တွေနဲ့ ရင်ဘတ်တွေကိုထုတယ်၊ ရိုက်တယ်။ အဲဒီကောင်လေးမှာတော့ ခေါင်းပေါက်ပြီး နဖူးမှာယောင် သွားတာပေါ့။
ကျမတို့ထဲက သန့်ဇင်ဖြိုးဆိုတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုလည်း သေနတ်ဒင်တွေနဲ့ထုနေတုန်း သူ့တပည့်လေးတစ်ယောက်က ကြားကဝင်ခံလိုက်တာ အဲဒီကောင် လေးမှာလည်း နှုတ်ခမ်းတွေပေါက်သွားတယ်။ ပြီးတော့ လက်ဆေးနေတာ ကြာတယ်ဆိုပြီး ဒေါ်နီနီမေမြင့်ကို ပါးတွေ ရိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်သုံးယောက် ဖြစ်တဲ့ ဦးမင်းအောင်ရယ်၊ ဒေါ်နီနီမေမြင့်ရယ်၊ ဒေါ်ချစ်ချစ်ချောရယ်ကို ကြိုးနဲ့တုပ်ပြီးခေါ်သွားပါတယ်။
→ ဦးမင်းအောင်ကို လက်ပြန်ကြိုးတုပ်ပြီးခေါ်သွားတယ်
အိမ်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ ရွာသားသုံးလေးယောက်နဲ့ ကျမတို့ကိုလည်းခေါ်သွားတယ်။ ကျမမှတ်မိသလောက်တော့ သူတို့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ က (၇) ယောက်လောက်ရှိပါတယ်။ အိမ်ခြံထဲမှာက (၅) ယောက်၊ ခြံအပြင်မှာက (၂) ယောက်။ အိမ်ခြံထဲက (၅) ယောက်မှာ နှစ်ယောက်က အိမ်အောက်ကနေ သေနတ်နဲ့ချိန်ထားတယ်။ နောက်နှစ်ယောက်က ကျမတို့အိတ်တွေ၊ ဖုန်း တွေကိုသိမ်းတယ်။ ကျမတို့ကို လှေဆိပ်ကိုခေါ်သွားတယ်။ ဒေါ်နီနီမေမြင့်ဘေးမှာ လက်နက်ကိုင်တစ်ယောက်၊ ဒေါ်ချစ်ချစ်ချောဘေးမှာတစ်ယောက်၊ ဦးမင်းအောင်ဘေးမှာတစ်ယောက်၊ ကျမဘေးမှာတစ်ယောက်။ ကျမဘေးကတစ်ယောက်က အားကစားဘောင်းဘီတို အဖြူရောင်နဲ့။ ဦးမင်းအောင်ကို ရိုက်တဲ့တစ်ယောက်က ဘောင်းဘီအမည်း၊ အင်္ကျီအစိမ်းရောင်နဲ့ပါ။ သူတို့အားလုံး Mask တွေတပ်ထားတယ်။ လှေဆိပ်မရောက်ခင် ကွမ်းယာဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ရှေ့ရောက် တော့ ဦးမင်းအောင်ကိုလက်ပြန်ကြိုးတုပ်ထားတာကို ငှက်ကြီးတောင်ဓားနဲ့ဖြတ်ပြီး လက်ကိုရှေ့ကနေပြန်ပြီးချည်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာကျမတို့နဲ့ပါလာတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ကို ပင်နီအင်္ကျီဝတ်ထားရကောင်းလားဆိုပြီး သူတို့ဒေသစကားသံတွေနဲ့ပြောပြီး ဝိုင်းရိုက်ကြတယ်။ ရိုက်ပြီးတော့သူတို့ ကို ရွာသားတွေဆိုပြီးထားခဲ့တယ်။ ကျမတို့ကိုရှေ့ကိုပို့ တယ်။
ဒေါ်နီနီမေမြင့်ကို လက်နက်ကိုင်တစ်ယောက်က လှေဆီခေါ်သွားတယ်။ ဒေါ်ချစ်ချစ်ချောကိုတော့လက်နက်ကိုင် တစ်ယောက်က ဇက်ပိုးကိုတဖြောင်းဖြောင်းနဲ့ နှစ်ချက်သုံးချက်ရိုက်ပြီး တုပ်ဆွဲပြီးခေါ်သွားတယ်။ ပြီးတော့ ကိုမင်းအောင်ကိုခေါ်သွားတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ လှေနားကနေ ‘မြန်မြန် လာ၊ မြန်မြန်လာ’ လာလို့ခေါ်တယ်ပြောတယ်။ အဲဒီအနားကကြားလိုက်တဲ့ ရွာသားတစ်ယောက်ကပြောတာ။ ကျမတို့ ကတော့ သတိမထားမိလိုက်ဘူး။ အဲဒီလိုခေါ်တော့ ကျမတို့ အနားက လက်နက်ကိုင်က ရှေ့ကိုခပ်သွက်သွက်ဆင်းသွားချိန်မှာ ကျမတို့က ဒီဘက်အကွယ်ကို ပြေးပြီးပုန်းကြတယ်။
ဒီလိုလုပ်ရပ်တွေကို လုံးဝကိုရှုတ်ချတယ်။ ကျမတို့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ကျမတို့ရခိုင်ပြည်သူတွေ၊ ကိုယ့်ရခိုင်ပြည်သူတွေ ဒုက္ခအခက်အခဲမျိုးစုံကြုံတွေ့နေကြရတာကိုလည်း ကျမအနေနဲ့ …
ငြမ်းမီဒီယာ – ဖမ်းဆီးခံရသူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖမ်းဆီးသူတွေဘက်က တစ်ခုခုဆက်သွယ်တာ၊ နောက် သတင်းအချက်အလက်တစ်ခုခုထူးခြားတာ ဘာများကြားသိရပါသလဲ။
MAAN – ဘာမှတော့မကြားမိသေးဘူး။ ကျမတို့လည်း တစ်ခုခုသတင်းထူးခြားတာရမလားဆိုပြီး လက်လှမ်းမီသလောက် စုံစမ်းနေပေမယ့် ဘာမှမထူးခြားသေးပါဘူး။
ငြမ်းမီဒီယာ – ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးခရီးထွက်တာမှာ ခုလို လက်နက်အားကိုးနဲ့ အကြမ်းဖက်ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးတာဟာ ဘာကြောင့်လို့ ထင်မိပါသလဲ။
MAAN – ကျမအမြင်ပြောရရင် အခုရွေးကောက်ပွဲမှာလည်း ကျမတို့မြို့နယ်မှာ ကျမတို့ပါတီက နိုင်ခြေအများဆုံး ဖြစ်နေတော့ ကျမတို့ပါတီကိုမနိုင်စေချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့။ အဲဒီလိုမျိုးတွေနဲ့ ဒီကိုယ်စားလှယ်တွေမရှိဘူးဆိုရင် ဒီပါတီကတော့ ဒီမြို့နယ်မှာယှဉ်ပြိုင်စရာ အကြောင်းမရှိတော့ဘူးဆိုပြီး လုပ် တာလို့ ကျမကတော့မြင်တယ်ရှင့်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ကျမတို့မှာ လူမျိုးရေး၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတွေ မုန်းတီးစရာလည်းအကြောင်းလည်းမရှိဘူးလေ။
ကျမတို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဆိုတာကလည်း ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပဲ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေလေ။ ဆိုတော့ ကျမတို့ NLD က ဒီမြို့နယ်မှာ ဝင်မပြိုင်နိုင်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ တစ်ချက်ပဲရှိတယ်လို့ ကျမအနေနဲ့မြင်တယ်။
ငြမ်းမီဒီယာ – ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကို ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဝင်ပြိုင်လို့မရအောင် လက်နက်အားကိုးနဲ့ အကြမ်းဖက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်ဆိုတဲ့ လူတွေရှိနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းကို ဘယ်လိုအဖွဲ့အစည်းမျိုးလို့ ခန့်မှန်းသုံးသပ်မိပါသလဲ။
MAAN – ကျမတို့ NLD ကို ဒီရခိုင်မြေပေါ်မှာ လုံးဝကိုပပျောက်သွားစေချင်တဲ့ လူတချို့ကတော့ရှိနေတယ်လို့ ကျမထင် တယ်လေ။ ကျမတို့ ရခိုင်တောင်ပိုင်းမှာ ၂၀၁၅ တုန်းကလည်း ကျမတို့ NLD အနိုင်ရခဲ့တယ်။ တခြားနေရာတွေမှာတော့ မရှိသလောက်ပေါ့။ မာန်အောင်တစ်ခုတော့ရှိတာပေါ့။ အဲဒီတော့ ကျမတို့တောင်ကုတ်မြို့မှာလည်း ကျမတို့ NLD ကအားသာနေတော့ NLD ကိုမရှိစေချင်တဲ့ လက်နက်ကိုင် တချို့ရှိနေလို့ လုပ်တာလို့ပဲ ကျမမြင်ပါတယ်ရှင့်။
လက်နက်တွေနဲ့ မတရားကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း လုပ်သွားပုံတွေကိုကြည့်ပြီး ကျမ အင်မတန်မှ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ ကိုယ့်ရခိုင်အချင်းချင်း ဒီလိုမျိုးတွေလုပ်သွားတာကို …
ငြမ်းမီဒီယာ – NLD ကို ရခိုင်မြေပေါ်မှာမရှိစေချင်ဘူးဆိုတာ ရခိုင်ပြည်တွေအများစုရဲ့စိတ်ဆန္ဒသဘောထားလား၊ ဒါမှမဟုတ် ရခိုင်ပြည်နယ်က လူတစ်စုရဲ့စိတ်ဆန္ဒပဲလား။ ဘယ်လိုပြောနိုင်ပါသလဲ။
MAAN – လူတစ်စုရဲ့ စိတ်ဆန္ဒလို့ပဲပြောချင်တာပေါ့ရှင့်။ ကျမတို့ တချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်လည်း အကြောက်တရားတွေ လွှမ်းမိုးပြီးတော့ သူ့စိတ်ထဲမှာမရှိတာတွေလည်းရှိတာပေါ့။ ကျမတို့ဆီမှာတော့ လူထုက ကျမတို့ NLD ကိုပဲလိုလားတယ်။ NLD ကကိုယ်စားလှယ်တွေက လူထုနဲ့ အမြဲတမ်းထိတွေ့ပြီး ဆောင်ရွက်နေတာတွေလည်းရှိတယ်။ အဲဒိတော့ ဒီနှစ်ကလည်း ကျမတို့မှာ အားကောင်းတယ်လေ။ ဆိုတော့ လူတစ်စုက မလိုတဲ့အတွက်လုပ်တာလို့ပဲ ကျမမြင်မိပါတယ်ရှင့်။
→ လက်နက်နဲ့ အကြမ်းဖက်တယ်ဆိုတာ မဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စ
ငြမ်းမီဒီယာ – သိရသလောက်ဆိုရင် ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကမြို့တွေဖြစ်တဲ့ တောင်ကုတ်၊ သံတွဲ၊ ဂွ ဆိုတဲ့ မြို့တွေဟာ ခုလိုအဖြစ်အပျက်မျိုး ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထမရှိသလောက်ကိုနည်းပါတယ်။ ဆိုတော့ ခုလိုဖြစ်စဉ်ကြီးဖြစ်ပျက်သွားတဲ့အပေါ် တောင်ကုတ်မြို့ဒေသခံတွေရဲ့ စိတ်ခံစားမှုက ဘယ်လိုရှိပါသလဲ။
MAAN – ကျမ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ကျမသိရသလောက်ကတော့ အများအားဖြင့် ကျမတို့ကို နောက်မဆုတ်ဘဲ ဆက်ပြီးလုပ်ဖို့ ပဲ တိုက်တွန်းအားပေးကြတယ်။ ဒီနေ့ဆို ကျမတို့အစည်းအဝေးလေးတစ်ခုလုပ်တယ်ပေါ့။ အဲဒီမှာလည်း ကျမတို့က ဒါ ဆက်လုပ်မယ်ပေါ့။ ပြီးတော့ အဲဒီမှာပြောကြဆိုကြတာတွေမှာရော၊ ကျမ သိရ သလောက်ကတော့ ကျမတို့ကိုထောက်ခံအားပေးမှုက နှစ်ဆလောက်အထိကို ပိုပြီးရှိလာကြတာတွေ့ရတယ်။
ကျမကိုဆိုရင်လည်း ဆက်လုပ်ဖို့၊ လုံးဝစိတ်ဓာတ်မကျဖို့၊ လုံးဝနောက်မဆုတ်ဖို့ကိုပဲ ပြောကြပါတယ်။ တချို့ကဆိုရင် ဒီကိစ္စကို ကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်း လူထုဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲတွေတောင်လုပ်ဖို့ ပြောကြတဲ့သူတွေတောင်အများကြီးရှိပါတယ်။
ငြမ်းမီဒီယာ – ခုလို အသာတကြည်လိုက်ပါမယ်လို့ ပြောနေတဲ့ကြားက အမျိုးသမီးတွေကိုပါမချန် ရိုက်နှက်အကြမ်းဖက်ပြီး ကြိုးနဲ့တုပ်ဆွဲခေါ်သွားတဲ့ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းဟာ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ဒေသခံတွေက ခန့်မှန်းပြောဆိုကြပါသလဲ။
MAAN – ဘယ်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ ကျမတို့ကိုလာခေါ်တဲ့သူတွေရဲ့ လေသံတွေကို နားထောင်ကြည့်ပြီး၊ သူတို့ပြုမူပုံတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ ဘယ်အဖွဲ့ရှိမလဲရှင်။ ကျမတို့ရခိုင်ပြည်မှာ ရခိုင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပဲရှိတာပေါ့။ ရခိုင် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကဖြစ်တယ်လို့ ပြောကြတာပဲရှိတယ်။
ငြမ်းမီဒီယာ – ဒီလိုလုပ်ရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံရေးနယ်ပါယ်က ရခိုင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးအနေနဲ့ ဘယ်လိုမှတ်ချက်ပြုချင်ပါသလဲ။
MAAN – ကျမအနေနဲ့ ဒီလိုလုပ်ရပ်တွေကို လုံးဝကိုရှုတ်ချတယ်။ ကျမတို့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ကျမတို့ရခိုင်ပြည်သူတွေ၊ ကိုယ့်ရခိုင်ပြည်သူတွေ ဒုက္ခအခက်အခဲမျိုးစုံကြုံတွေ့နေကြရတာကိုလည်း ကျမအနေနဲ့ လွန်စွာစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ အင်မတန်အေးချမ်းနေတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာ ခုနောက်ပိုင်း ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာတာ ကျမတို့ဘဝတစ်လျှောက်၊ သက်တမ်းတစ်လျှောက် ဒီနှစ်ပိုင်းတွေမှာမှ ကြားသိလာရတာလေ။
ကျမတို့ရဲ့ ဒီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဆိုတာကလည်း လူထုနဲ့ထိတွေ့ပြီး လူထုအတွက်အလုပ်လုပ်ပေးနေသူဆိုတာ ဒီတောင်ကုတ်မြို့က ပြည်သူ လူထု အများစုကသိကြပါ တယ်။ ကျမတို့က ဓမ္မနည်းနဲ့သွားနေတာပါ။ နိုင်ငံရေးကိုလည်း ငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေကြတာပါ။ မဲဆွယ်စည်းရုံးတယ်ဆိုရင်လည်း ဥပဒေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့အညီ ပြောဆိုစည်းရုံးလုပ်ကိုင်ကြတာပါ။
ဒီလိုလုပ်ကိုင်နေကြတာကို လက်နက်တွေနဲ့ မတရားကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း လုပ်သွားပုံတွေကိုကြည့်ပြီး ကျမ အင်မတန်မှ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ ကိုယ့်ရခိုင်အချင်းချင်း ဒီလိုမျိုးတွေလုပ်သွားတာကို အင်မတန်ဝမ်းနည်းရပါတယ်။ ဒီလုပ်ရပ်တွေကို ရှုတ်ချပါတယ်။ ကျမစိတ်မကောင်းလည်းဖြစ်ရပါတယ်။
ငြမ်းမီဒီယာ – တခြားဖြည့်စွက်ပြောချင်တာရှိရင်လည်း ပြောကြားပေးပါ။
MAAN – ကျမတို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကို ရခိုင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့က ဖမ်းဆီးသွားတဲ့ကိစ္စအပေါ်မှာ ကျမပြောချင်တာကတော့ ကျမတို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေသည် ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုတ်မြို့နယ် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်သာမက တခြားမြို့နယ်တွေအတွက်ကိုလည်း လက်လှမ်းမီသလောက် အစဉ်တစိုက်လုပ်ကိုင်ပေးနေကြသူတွေဖြစ်တယ်။
ကျမတို့အားလုံးဟာ နိုင်ငံရေးကို ငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းနဲ့ လုပ်ကိုင်နေကြသူတွေလည်းဖြစ်တယ်။ ဒီအတွက်ကြောင့် ကျမတို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ အန္တရာယ်တွေမတွေ့ကြုံရဘဲ အမြန်ဆုံးပြန်လည်လွတ်မြောက် လာဖို့ကိုပဲ ကျမပြောချင်ပါတယ်။
Tags: NLD, တိုင်းရင်းသား, တောင်ကုတ်, ဖောင်းကား, ရခိုင်ပြည်နယ်, ရခိုင်လက်နက်ကိုင်, ရွေးကောက်ပွဲ, လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
လက်နက်နဲ့ အကြမ်းဖက်တယ်ဆိုတာ မဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စ